Home » etn » Eoropeana amin'ny fialantsasatra: Vonona fa manahy
Eoropeana amin'ny fialantsasatra
Maherin'ny antsasaky ny eropeana no mahatsapa fiheverana tsara fa handray ny fialan-tsasatr'izy ireo amin'ny fahavaratra vokatr'ilay vaksininy. Saingy, ny habaka voafetra amin'ny hetsika fialantsasatra noho ny famerana COVID-19 dia mavesatra ao an-tsain'ny eropeana.
Na eo aza ny fanombohana ny fanolorana vaksinina manerana an'i Eropa, dia mitombo hatrany ny fahatokisan'ny mpandeha.
Misy fiheverana mitombo momba ny fitsidihana trano fisotroana sy trano fisakafoanana hiaina ny culinary atolotra amin'ny toerana aleha.
Ny fitsangatsanganana an'habakabaka dia tampon'isan'ny lisitra mety hitrangan'ny viriosy amin'ny 17 isanjaton'ny eropeana izay manondro ny sidina mety hampidi-doza.
Ny fanantenana fitsangatsanganana amin'ny fahavaratra dia mamporisika ny eropeana hanao fialantsasatra, satria ny maro an'isa (56 isan-jato) dia milaza fa handeha hanao vakansy amin'ny faran'ny volana aogositra 2021, na an-trano na any amin'ny firenena eropeana hafa. Raha ampitahaina, ny 27 isan-jaton'ny valinteny ihany no mbola tsy vonona ny handeha ao anatin'ny 6 volana ho avy. Izany dia araka ny tatitra farany "Sentiment Monitoring for Domestic and Intra-European Travel - Wave 6" navoakan'ny Kaomisiona momba ny dia any Eropa (Sns).
Ity tatitra isam-bolana ity dia manome fomba fijery vaovao momba ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny drafitry ny dia sy ny safidin'ny eoropeanina momba ny karazana toerana sy traikefa, vanim-potoana fialantsasatra ary fitaintainana mifandraika amin'ny dia mandritra ny volana ho avy.
Ny fanolorana vaksinim-borona dia mampitombo ny fahatokisan-tena momba ny fitsangatsanganana fahavaratra
Na eo aza ny fanombohana kamo vaksiny miparitaka erak'i Eoropa, mitombo hatrany ny fahatokisan'ny mpitsangantsangana, mampisondrotra fanantenana ho sitrana haingana kokoa. Nasehon'ny fanadihadiana fa 48 isan-jaton'ny valinteny dia mizara fahatsapana fanantenana momba ny drafitra fitsangatsanganana, entin'ny fampandrosoana sy fankatoavana vaksinin'ny COVID-19. Ny 21 isan-jato ihany no tsy be fanantenana momba ny fikasana hanao dia lavitra, na inona na inona vaksiny.
Anisan'ireo mpandeha vorona voalohany any Eoropa, 9 amin'ny 10 no efa manana fotoana manokana hanaovana fialan-tsasatra, mijery ny volana jolay sy aogositra (46 isan-jato). 29 isan-jato kosa no milaza fa mikasa ny hanao ny dia manaraka izy ireo na dia ela aza, ny Mey na Jona. Amin'izy ireo, 49 isan-jato no vonona handeha any amin'ny firenena eropeana iray hafa, raha 36 isanjato kosa no misafidy toeram-pijanonana.
Mipoitra ny ahiahy momba ny fahafaha-manao tombony amin'ny fialantsasatra
Satria manomboka mieritreritra fialantsasatra amin'ny fahavaratra ny eropeana, dia mijanona eo ny sain'ny manamarina raha afaka mankafy faran'izay feno ny fialantsasatra ho avy. Raha ny fepetra momba ny quarantine no mbola mampanahy ny 16 isan-jaton'ny mpandeha vorona voalohany, ny fetra voafetra ho an'ny hetsika fialantsasatra any amin'ny toerana haleha noho ny famerana COVID-19 dia nanjary teboka fanaintainana lehibe (11 isan-jato).
Ho fanampin'izany, ankehitriny dia misy fahatsapana fitandremana bebe kokoa momba ny fitsidihana trano fisotroana sy fisakafoanana hiaina ny culinary atolotra amin'ny toerana aleha. 13 isan-jaton'ny mpamaly no mahatsapa fa mampidi-doza amin'ny fahasalamany ireo toerana ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny fitsangatsanganana an-habakabaka dia mbola mitana ny lisitr'ireo loza mety hitranga amin'ny virus, miaraka amin'ny 17 isanjaton'ny eropeana manondro ny sidina mety hampidi-doza
Ny poloney sy ny italiana no tsara indrindra amin'ny dia amin'ny fahavaratra
Na dia ao anatin'ny lisitra faniriana ho an'ny ankamaroan'ny eropeana nanaovana fanadihadiana aza ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra, dia samy hafa amin'ny haben'ny hafanam-pony ny firenena. Poloney (79 isan-jato) ary italiana (64 isan-jato) no nandrombaka ny fironana hanomana fialan-tsasatra alohan'ny faran'ny volana aogositra, arahin'ny mponina Australiana (57 isan-jato), Alemanina ary Holandey (samy 56 isan-jato). Anisan'ireo 5 voalohany, ny Italiana dia mirona mankany amin'ny fitsangatsanganana an-trano (53 isan-jato), raha maherin'ny 2 amin'ny 5 ny mpamaly avy amin'ny tsena fiaviana hafa dia manana safidy mazava kokoa momba ny dia any ivelany.